:: My Little World ::: August 2009
ည ၁၂ ထိုးလုပြီ။
အလုပ်လုပ်ရင်း August လ ကို နှုတ်ဆက်၍ September လကို ကြိုဆိုနေပါသည်။
ဘယ်တော့ အလုပ်ပြီး၍ ပြန်ရမည်ကို မသိ။
အစောဆုံးပြန်ရ မနက် ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီ..
၁၀ နာရီထက် နောက်ကျရောက်၍မရ...
စက်တင်ဘာ တစ်လလုံး အိပ်လိုပါက အိပ်နိုင်သည်။
နောက်နေ့ ... နေ့ လယ် ၂ နာရီမှ အိမ်ပြန်ရောက်တယ်။ မိုးရွာကြီးထဲ Taxi စီပြန်ရတာပေါ့။
Posted by Nay Nay Naing at 8/31/2009 11:56:00 PM7comments
Mac ရဲ့ OS အသစ် Snow Leopard - 28 August 2009 ထွက်မယ်။
Mac OS X Snow Leopard makes your Mac faster, more reliable, and easier to use.
Mac က ထွက်မယ့် OS အသစ် သုံးချင်တယ်။ Upgrade လုပ်လိုက်ရင် ကောင်းမလား၊ စဉ်းစားနေတယ်။ နောက်တောင် ကျနေပြီလိုပဲ။ ပြောတဲ့သူကလည်း ပြောပါတယ်၊ သတင်းတွေလည်းတွေ့ ပါတယ် ဒါပေမယ့် အလုပ်တွေရှုပ် နေတာနဲ့ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ုဒီအောက်က Box မျိုးလေး မနက်ဖြန်မှာ အရ လိုချင်တယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 8/27/2009 04:43:00 PM3comments
တိမ်ထူ၊ နေပူ၊ လျှပ်စီးလက် မိုးချုန်းမယ်။
အပူချိန်က 30 C (86 F)။
ဒီနေ့အလုပ်လုပ်ရင်း နေလို့သိပ်မကောင်း၊ ချောင်းနည်းနည်းပြန်ဆိုးချင်သလို ဖြစ်လာလို့ရာသီဥတု အခြေအနေ ကြည့်လိုက်တော့ တွေ့ လိုက်ရတဲ့ အခြေအနေ။
တကယ်ဆို ပုံမှာ အခုလောက် ပြထားတာ မပြည့်စုံသေးဘူး။ အဲဒီထဲ ကလိုတွေလဲ ဒီနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေအပြင် အခု အပြင်မှာ မိုးအုံ့ နေတယ်။ ခုနလေးတင်က မိုးစိမ့်စိမ့်ရွာ သွားသေးတယ် ဆိုတဲ့အတွက် မိုးစက်လေးတွေပါ ပါလိုက်မှာ ရာသီဥတုအခြေအနေပြတာ ပြည့်စုံသွားမှာ။
Posted by Nay Nay Naing at 8/26/2009 03:33:00 PM 1 comments
Posted by Nay Nay Naing at 8/25/2009 05:38:00 PM5comments
Posted by Nay Nay Naing at 8/24/2009 05:19:00 PM 1 comments
Posted by Nay Nay Naing at 8/24/2009 01:40:00 PM4comments
From Penang - Beach
ပီနန်ရောက်သွားတုန်းက Beach မှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ။ မမှားဘူးဆို အဲဒီ Beach က Batu Ferringhi Beach ဖြစ်မယ်။ မမှန်ဘူးဆို အတူသွားခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ လာပြင်ပေးလိမ့်မယ်။ Beach မှာဘာသွားလုပ်ခဲ့လဲဆို... လူကြီးသူမတွေက အနားယူတယ် ကလေးလူကြီးတွေက ကစားခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီ Beach မှာ ရေကူးလို့ မကောင်းဘူး ၊ ရေကူးနေတဲ့သူတွေ မတွေ့ ဘူး။ ရေက နောက်ပြီး နက်တယ်။ ဒါပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရေကြည်တယ် ရေကူးလို့ ကောင်းတယ်ဆိုလည်း ကိုယ့်အတွက် မထူးဘူး။ ကိုယ်မှ ရေမကူးတတ်တာ။
ဘာတွေကစားခဲ့လဲဆို Banana-Boat စီးတယ်၊ JetSki စီးတယ်။ ပြီးတော့ Parasailing လုပ်တယ်။ အဲဒီမှာ ထပ်ဆော့လို့ ရတာ မြင်းစီးတာနဲ့ကားမောင်းတာ နှစ်ခုလဲရှိသေးတယ်။ အဲဒီနှစ်ခုတော့ မဆော့ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ သူငယ်ချင်းစုံတွဲတစ်တွဲကတော့ ကားမောင်းတယ်။ သဲထဲမှာမောင်းရတာ။ အတူသွားတဲ့ သူတွေ အားလုံး အတူစီးလို့ ရတဲ့ Banana-Boat စီးတာကိုဆို တစ်ခေါက်နဲ့ အားမရလို့နှစ်ခါထပ်စီး ခဲ့ကြတယ်။
ကမ်းခြေမှာ ကစားခဲ့တာတွေထဲမှာ Parasailing လုပ်ရတာကို သဘောအကျဆုံးပဲ။ ဘာလို့ လဲဆို လေထဲမှာ လေဟုန်စီးပြီး ကောင်းကင်ပေါ်ကနေ ဟိုး... အဝေးကရှု့ ခင်းတွေ..နဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို ကြည့်လို့ ရ၊ မြင်ခွင့်ရခဲ့လို့ ။ အတွေ့ အကြုံအသစ် တစ်ခုပဲ။ အခွင့်ကြုံရင် ထပ်စီးအုံးမယ်။ ရှေ့ ဆောင်လမ်းပြ လုပ်ခဲ့တဲ့ ညီမငယ်လေးကို ကျေးဇူး။ သူသာ မစခဲ့ရင် ဘယ်သူမှ Parasailing လုပ်ခွင့်ကြုံမှာမဟုတ်ဘူး။
ပီနန် သို့ တစ်ခေါက်
Labels: Fun, Malaysia, Travel
Posted by Nay Nay Naing at 8/20/2009 10:58:00 AM5comments
ဒီနေ့မနက်ပိုင်း ၁၁ နာရီလောက်က ဖုန်းလာလို့ဖုန်းထွက် ပြောရင်း အပြင်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာ မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်း။ ကောင်းကင်ကပြာ၊ တိမ်တွေကဖြူဖွေးပြီး ကြည့်လို့ ကောင်းတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲပေါ် မပေါ်တော့ မသေချာဘူး၊ ကြည့်နေရင်း သဘောကျလို့ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထား လိုက်တယ်။ ရှေ့ မှာ မှန်ခံနေတော့ အားမရဘူး။
Posted by Nay Nay Naing at 8/18/2009 02:46:00 PM 8 comments
See the lights.. See the party, the ball gowns
Posted by Nay Nay Naing at 8/17/2009 11:20:00 AM 1 comments
ဒီထဲကလောက်တော့ ခံစားချက် မပြင်းထန်ပေမယ့်......
ဒီနေ့တနင်္လာနေ့ .....
အလုပ်ရောက်ရောက်ခြင်း "Latest update" ဆိုတဲ့ အီးမေးတစ်စောင် ရတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်က စပြီး Special Pormotion အနေနဲ့ရောင်းပေးနေတဲ့ Product တွေရဲ့ Sales Target ကို မြှင့်လိုက်ကြောင်း သတင်းပေးထားတာပါ။ အရင်ထားတဲ့ Target အရဆို ဒီအပတ် အတွင်း အရောင်းပိတ်နိုင်ပြီး၊ အလုပ်ရှုပ်တာ နည်းနည်းသက်သာသွားမယ် ထင်နေခဲ့တာ။ အခု အခြေအနအရတော့ လက်ရှိ ရောင်းအား အတိုင်း ဆက်သွားမယ် ဆိုရင်တောင်မှ အဲဒီ Target အသစ်ကို ဒီလကုန် လောက်မှ ပြည့်နိုင်မယ်။ အနည်းဆုံး လကုန်အထိ ဆက်အလုပ်ရှုပ်မယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
တနင်္လာနေ့ မျိုးမှာ အဲဒီလို သတင်းမျိုး အသိမပေးသင့်ဘူး။ မနက်ဖြန်လောက်မှ ပို့ တယ်ဆို တော်သေး။
Posted by Nay Nay Naing at 8/17/2009 09:53:00 AM2comments
"The Time Traveler's Wife" ရုပ်ရှင်ထဲက သီချင်းလေး တစ်ပုဒ် ကောင်းတယ် ညွန်းလို့နားထောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
"Broken" Music Video by Lifehouse for The Time Traveler's Wife
So I'm holdin' on (I'm still holdin'), I'm holdin' on (I'm still holdin'),
I'm holdin' on (I'm still holdin'),
I'm holdin' on (I'm still holdin'), I'm holdin' on (I'm still holdin'),
ခုရက်ပိုင်း အလုပ်တွေရှုပ်နေတာနဲ့သီချင်းတွေကို အချိန်ပေး လိုက်ရှာပြီး နားမထောင်ဖြစ်တာ ကြာနေပြီ။ ခုလို ညွန်းတဲ့သီချင်းတွေလောက်ပဲ သေချာ နားထောင်ဖြစ်နေတယ်။ သီချင်းလေးကောင်းတယ်... အင်း...ရုပ်ရှင်လေးကလည်း ကောင်းမယ့်ပုံပဲ...
သီချင်းတွေ နားမထောင်၊ ကာတွန်းတွေ မဖတ်၊ ဂိမ်းတွေ မကစား၊ ရုပ်ရှင်တွေ မကြည့်၊ အစားကောင်းတွေ မစား.... ပိုက်ဆံရှာတဲ့ အလုပ်ကြီးပဲ လုပ်နေရတယ်ဆို ဘ၀ကြီးက ပျင်းစရာနေဖြစ်မှာ။ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ ဘ၀မျိုး ပိုင်ဆိုင်သူ မဖြစ်ရလေအောင် ကြိုးစားရမယ်...
ပျင်းစရာမကောင်းသော ဘ၀များကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ......
Posted by Nay Nay Naing at 8/13/2009 07:47:00 AM2comments
ကာတွန်းတွေ လျှောက်ကြည့်တယ်။ ဒါလေး သဘောကျသွားတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 8/12/2009 10:49:00 AM 1 comments
They are special!!
Labels: Day, Diary, Food
Posted by Nay Nay Naing at 8/10/2009 07:15:00 PM 10 comments
Do you hear the people sing? ( August, 8 Memorial )
Do you hear the people sing? ( 8888 Memorial)
Posted by Nay Nay Naing at 8/08/2009 12:04:00 PM4comments
မနှစ်က သွားခဲ့တဲ့ ခရီး။ ပီနန်သွားတဲ့ အကြောင်း၊ ရေးမယ်ဆို အစပျိုး၊ နောက်တော့ မရေးဖြစ်ဘူး။ အစဉ်လိုက်ရေးမယ် စိတ်ကူးမိတာကလဲ ရေးချင်စိတ်ကို အဟန့် အတားတစ်ခုဖြစ်နေစေခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ တော့ ရေးချင်တာရေးတော့မယ်လို့ စိတ်ကူးပြီး ပုံတွေပြန်ကြည့် စိတ်ကူးပေါ်တာလေးက စရေးလိုက်တယ်။ ကြာရင်မေ့သွားတော့မှာ၊ အခုတောင် အတော်မေ့နေပြီ။
လင်းနို့ ဂူလို့ ခေါ်မလား Penang Bat Cave က ပီနန်းတောင်ကုန်း ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာ ရှိတယ်။ ကျွန်မတို့ ငှါးတဲ့ကားကိုမောင်းတဲ့ ကားသမားကို သဘောကောင်းတယ် ဆိုရမယ်။ တစ်နေရာ ရောက်တိုင်း အဲဒီနေရာရဲ့ ထူးခြားမှု့ တွေကို ရှင်းပြပေးမယ်။ သွားမယ်ဆိုတုန်းကလည်း ချက်ချင်းကြီးသွားသလိုဖြစ်နေတယ် ကိုယ်သွားမယ့်နေရာမှာရှိတဲ့ ထင်ရှားတဲ့နေရာတွေမှာ ဘာတွေရှိသလဲဆိုတာ ဖတ်မှတ်မထားမိဘူး။ တကယ်ဆို ခရီးတစ်ခု မသွားခင် ကိုယ်သွားမယ့် နေရာကို Google အကူအညီနဲ့ ကြိုလေ့လာတားခဲ့ရင် ပိုကောင်းမယ်။
ပထမ လင့်နို့ ဂူသွားမယ်ဆိုလို့ဂူအကြီးကြီးတွေ့ ရမယ်ထင်တာ ကားဆိုက်လို့ ရှေ့ မှာကြည့်လိုက်တော့ အဆောက်အအုံ သေးသေးလေးတစ်ခုတွေ့ လိုက်ရတယ်။ အရင်ကတုန်း (နှစ် ၂၀-၃၀က) ဒီနေရာကို တော်ယုံလူ ၀င်ခွင့်မပြုဘူးလို့ ပြောတယ်။ ကျွန်မ မှတ်မိသလောက် အဲဒီကားသမားရှင်းပြတာတော့ လင်းနို့ ကိုခေါ်တဲ့ အသံထွက်က တရုတ်လို့ ကံကောင်းခြင်း ဆိုလား အဓိပ္ပါယ်ရတယ်တဲ့ အဲဒီမှာ ကံကောင်းအောင် စီရင်ဆောင်ရွက်လို့ ရတဲ့ အစီအရင်တွေရှိတယ်ပြောတယ်။ အထဲ ရောက်တော့လည်း ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ ကို ရှင်းပြပါတယ်။ တကယ်ဟုတ် မဟုတ်တော့ မသိဘူး သူပြောသလို၊ သူလုပ်ပြသလို လိုက်တော့ လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ သူပြောတဲ့အရာတွေက ခက်ခဲတာတွေလည်း မဟုတ်ဘူးလေ။ ( ဒီလို ထည့်ပြောရတာက တချို့ အရာတွေဟာ တခြားသူတွေ လွယ်လွယ်ကူကူ လိုက်လုပ်နိုင်ကြပေမယ့် ကျွန်မအတွက် လိုက်လုပ်ရခက်တာ တွေရှိလို့ ပါ။) အင်း... ကံကောင်းတယ် ဆိုတာကလည်း လူတိုင်းလိုချင်တဲ့ အရာမဟုတ်လား။
ပထမ ပြောပြတာက ၀င်ဝင်ခြင်းမှာတွေ့ ရတဲ့ အမ်းကုန်းးရုပ်ကြီး။ အဲဒီအရုပ်ရှေ့ မှာ ထုံးစံအတိုင်း မွေးတိုင်တွေထွန်းထားတယ်။ ထူးထူးခြားခြား ဆီပုံးတွေ အများကြီးလည်းတွေ့ ရတယ်။ ဘာလို့ အဲလို ဆီပုံးတွေရှိနေတာလည်း သိချင်စိတ်ရှိပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း တစ်ခုခုဆို မေးဖို့ နှုတ်တွန့် တဲ့ကျွန်မ မမေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒီတော့ ပြန်မပြောပြနိုင်ဘူးပေါ့။ အဲဒီအကျင့်လေးလည်း ပြင်ရအုံးမယ်။
အဲဒီ အမ်းကုန်းက လူတွေ အသေအချာ စိုက်ကြည့်နေတာတွေ့ ရတယ်။ ကားသမားကရှင်းပြတယ် အဲဒီအမ်းကုန်က ကံစပ်တဲ့သူတွေကို (ထီ) နံပါတ်ပေးတယ်တဲ့။ ပေါက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့။ လူတွေယုံကြတယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ကြည့်နေတာတဲ့။ ဘယ်လိုကြည့်လည်းဆိုတာ ရှင်းပြတယ်။ နဖူးမှာရှိတဲ့ ကျောက်စိမ်းပြားတဲ ခါးမှာရှိတဲ့ ကျောက်စိမ်းပြား နေရာကို အသေအချာ စိုက်ကြည့်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒါဆို နံပါတ်တွေ ပေါ်လာတယ်တဲ့။ နဖူးနဲ့ခါးက အပြား တစ်ခုက နံပါတ် ၄ လုံး၊ တစ်ခုက နံပါတ် ၃ လုံးမြင်ရတယ်ဆိုလား... သေချာမမှတ်မိတော့ဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မြင်ရမယ့် နံပါတ်တွေမတူဘူး၊ ကြည့်ကြဆိုပြီး တိုက်တွန်းလို့စမ်းကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
(Tua Pek Kong - Senior Grand Uncle )
အဲ.. ပြောသေးတယ် ကိုယ်မြင်ရတဲ့နံပါတ်ကို ဘယ်သူမှမပြောရဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ထဲမှာထားပြီး ထီထိုးရတယ်တဲ့။ ဒါမှပေါက်မှာလို့ပြောတယ်။ မကြည့်တော့ဘူး ပြောတာကို စမ်းကြည့်ပါ အတင်းလာ တိုက်တွန်းနေတာနဲ့့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဘာဆို ဘာမှ မမြင်ဘူး။ ကျွန်မ က အဲလိုတွေ မယုံတတ်လို့ လားတော့လည်း မသိပါဘူးလေ။ ကျွန်မကို နံပါတ်တွေ မြင်ရတယ် မဟုတ်လား ၊ မြင်ရတဲ့ နံပါတ်သူ့ ကိုပြောစရာမလိုဘူးနော် စတာတွေလာမေးနေတော့ သွားလေးဖြီးပြီး ပြုံးပဲ ပြလိုက်တယ်။ သူက ယုံကြည်မှု့နဲ့ တိုက်တွန်းနေတာလေ။ ကျွန်မ ဒါတွေ မယုံဘူး မမြင်ရဘူးလို့ လဲ ပြောလို့ မကောင်း၊ ဘာမှလည်း မမြင်ရဆိုတော့ ပြုံးပဲပြလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲတွေးခဲ့ မိတယ်။ တခြားသူတွေကြည့်တာတော့ မြင်ရတယ်ပြောတာပဲ။ အဲဒီနံပါတ်တွေ ထီထိုးဖြစ်ကြလား၊ ပေါက်လား မပေါက်လားဆိုတာတော့ စကားစပ် မမေးကြည့်မိဘူး။
နောက်ကံကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ နည်းကတော့ လွယ်ပါတယ်။ အဲဒီ အမ်းကုန်းရဲ့ နောက်ကိုသွားလိုက်ရင် နေရာ နည်းနည်းလေး ရှိနေတာတွေ့ ရမယ်။ ဂူပေါက်လေးလို ပေါက်တစ်ခုရှိပြီး အဲဒီဝင်ပေါက် ညဘက်မှာ ရေပန်းလေး ကျနေတာရှိတယ်။ အဲဒီက ရေကို လက်ခုပ်နဲ့ ခပ်ပြီး မျက်နှာအရင်သစ်တဲ့။
မျက်နှာသစ်ပြီးရင် အဲဒီ ရေးပန်းဘေးမှာရှိတဲ့ ရေကန်သေးသေးလေးထဲက လိပ်မကြီးနဲ့လိပ်ကလေး ၂ ကောင်ကို ခေါင်းကနေ အဖျားပိုင်းအထိ တစ်ကောင်ကို သုံးခါ ကန်လေးထဲက ရေကို ခပ်ပြီး ရေဖြန်းပေးရတယ်တဲ့။ ရေခပ်ဖို့ ရေမှုတ်လေး ထားပေးထားတယ်။ နေရာက ကျဉ်းကျဉ်းလေးဆိုတာ ဒါလေးလုပ်ဖို့တန်းစီရသေးတယ်။ ကိုယ့်ရှေ့ မှာ အဲလို လုပ်နေတဲ့သူတွေကလည်း အများကြီးလေ။ လိပ်တစ်ကောင်ကို သုံးခါ ဖြေးဖြေးချင်း ခေါင်းက အမြှီး ရေဖြန်းရတာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ကြာတယ်။ စောင့်ရတာ စိတ်တောင် မရှည်ချင်ဘူး။
လိပ်မကြီးနဲ့လိပ်လေး ၂ ကောင်
အဲဒါပြီးတော့ မပြီးသေးဘူး။ အဲဒီလိပ်တွေရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုမှာရှိတဲ့ ကျောက်တုန်းမှာ ကတ်ထားတဲ့ လိပ်ကြီးကို ခေါင်းကနေ ဟိုအဖျားအထိ ကိုယ့်ရဲ့ လက်နဲ့ သုံးကြိမ် တိတိ သပ်ပေးရတယ်တဲ့။ အဲဒါလုပ်ပြီးရင်တော့ ကံကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ အစီအစဉ်ပြီးပါပြီ။
အပေါ်က လိပ်ကို အနီးကပ်ရိုက်ထားတာ။
အားလုံးပြီးမှ မေးရတယ်။ လင်းနိုဆိုလို့ တစ်ကောင်မှလည်းမတွေ့ ပါဘူးဆိုတော့မှ ခုနက ရေပန်းဘေးက အပေါက် ၀င်ကြည့်ရတာ၊ အဲဒီမှာရှိတယ်ဆိုလို့လင်းနို့် တွေကို သွားကြည့်ခဲ့ ပါသေးတယ်။ ဒီမှာက ကျွန်မမြင်ခဲ့ရတဲ့ ပီနန် လင်းနို့ ဂူက လင်းနို့ တွေ။ နေ့ ခင်းဆိုတော့ သူတို့ တွေ အိပ်နေတယ်၊ အသံမထွက်မိပဲ ကြည့်ဆိုတာတာင် မနေနိုင်လို့ဒါပဲလားဆို မေးမိသေးတယ်။
ဒီအောက်က ပုံကတော့ အန်ကယ်ကြီး ရုပ်ဘေးမှာ ယွန်းလိုဟာတွေ စီထပ်တင်ထားတာတွေ့ လို့ဒီလိုပဲ ဓာတ်ပုံ ရိုက်လာလိုက်တာ။ ဘာလဲတော့ မမေးနဲ့၊ မသိဘူး။
ဒါကတော့ လင်းနို့ ဂူအ၀င်က လိပ်။ အဲဒီလိပ်နဲ့ပတ်သက်တာတော့ အထွေအထူး မသိဘူး။ ရေးရင်းတွေးမိတာ ဓာတ်ပုံတွေအရ၊ ကျွန်မ မှတ်မိတာလည်းမမှားဘူးဆို အားလုံးအဲဒီမှာ လိပ် အကြီး ၃ ကောင်နဲ့လိပ်အသေးလေး ၂ ကောင် အရုပ်တွေရှိတယ်ပေါ့။
အဲဒီသွားတုန်းက ကျွန်မမှာ ကိုယ်ပိုင် ကမ်မရာပါ၊ ပါလာတဲ့ ဖုန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာဆိုတော့ အများကြီးမရိုက်နိုင်ဘူး။ ဖုန်းကလည်း သိတဲ့အတိုင်း ၅ နာရီပဲ ခံတယ်ပြီးတော့ အားကုန်ရော။ တကယ်ဆို အသေအချာ ကိုယ်သွားခဲတာလေးတွေ ရေးမှတ်ထားချင်တာပါ။ ခုတော့လည်း ရှိသမျှနဲ့ ကျေနပ်လိုက်ပါတယ်။ ၀င်ပေါက်လေးတောင် ဓာတ်ပုံမရိုက်ခဲ့ရလို့Google အားကိုးပြလိုက်တယ်။
ဒီမှာ သူများတွေ ရိုက်ထားတာတော့ လင်းနို့ တွေက အများကြီးလိုပဲ။ ကိုယ်တော့ အဲလောက်မတွေ့ ဘူးထင်တာပဲ။ မျက်စိက မကောင်း အလင်းရောင်မရ မှောင်နေတာကြောင့် မမြင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကဲ ပီနန်းက လင်းနို့ ဂူအကြောင်းကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ နောက်တစ်ကြိမ် အဲဒီနေရာကို ထပ်သွားဖြစ်မယ်ဆိုတာက မသေချာတဲ့ အရာမို့မမေ့ခင် မှတ်မိသမျှလေး ချရေးပြီ မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ တခြားနေရာတွေအကြောင်း မှတ်ထားဖို့ ရေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအုံးမယ်။ ခုတလော အရမ်း ပင်ပန်းတယ်။ ဒီ လင်းနို့ ဂူအကြောင်းတောင် မနေ့ က နေမကောင်းလို့ ခွင့်ယူဖြစ်တုန်း စရေးမိလို့ဒီနေ့ အဆုံးသတ်ဆက်ရေး ဖြစ်ခဲ့တယ်။
Labels: Diary, Malaysia, Travel
Posted by Nay Nay Naing at 8/07/2009 03:47:00 PM6comments
On my own ( from Les Miserables 10th anniversary concert)
Posted by Nay Nay Naing at 8/04/2009 11:43:00 AM3comments
I couldn't resistasmile after reading this.
Posted by Nay Nay Naing at 8/03/2009 01:45:00 PM3comments